Kedu ka Red Emperor CBD & Delta 8 THC Ngwa si arụ ọrụ
Cannabidiol (CBD) bụ cannabinoid na -emekarị na otu n'ime ihe mejupụtara hemp. CBD dị mma iri ma ọ naghị emetụta mmụọ, ọ dịla ogologo oge maka mmetụta ahụike ya bara uru na-enweghị nsonaazụ ọgwụ ọgwụ.
Usoro mwepụ nke Red Emperor CBD enweghị kemịkalụ ma na-eji carbon dioxide (CO2) nrụgide ewepụtara phytochemicals chọrọ (dịka CBD) site na osisi hemp. Usoro anyị enweghị ihe mgbaze kemịkal ọ bụla siri ike nke a na -ejikarị ewepụta CBD mmanụ. Mwepụta CO2 bụ ihe na-emetụta gburugburu ebe obibi yana anaghị egbu egbu, nke a na-ahụta ka ọ bụ usoro mmịpụta ihe ọkụkụ kacha dịrị nchebe n'ụwa.
Red Emperor CBD na-arụ ọrụ na ugbo hemp nke FDA kwadoro na Colorado, California na North Carolina. Anyị na-enye ndị ọrụ ugbo CBD anyị henes clones nwere mkpụrụ ndụ ihe nketa pụrụ iche iji hụ na ha mepụtara ngwaahịa hemp klaasị. Mgbe na tupu owuwe ihe ubi anyị, ndị ọrụ ugbo na -anwale ihe ọkụkụ iji jide n'aka na ha enweghị ebu, ebu ma ọ bụ ọla dị arọ.
Mgbe emechara usoro nnwale, ndị ọrụ ugbo anyị na-ebuga ma hazie ihe ọkụkụ bara ụba phytocannabinoid n'otu ụlọ ọrụ mwepụ ikike nyere ikike wee tụgharịa ngwaahịa ahụ ka ọ bụrụ ngwaahịa CBD nke ụwa.
A na-emepụta ngwaahịa anyị emechara site na iji usoro ISO ma ọ bụ GMP. Ụdị anyị pụrụ iche na patent nke CBD dị elu na obere THC wii wii na -emepụta cannabinoids na terpenes bara uru karịa ụdị ahịhịa ala ma ọ bụ ụdị hemp dị na hemp ụlọ ọrụ China ma ọ bụ Europe.
Ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-azụlite ụdị mkpụrụ osisi cannabis iji mepụta THC karịa, ndị otu mkpụrụ ndụ ihe nketa anyị na-ekepụta ụdị wii wii iji mepụta LESS THC iji mepụta ụdị cannabinoid na-abụghị psychotropic dị ka CBD, CBG, CBN, Delta 8 THC, na CBC
Emebere ngwaahịa anyị niile iji gosipụta ụdị cannabinoids na terpenes zuru oke, yana Red Emperor CBD & Delta 8 THC A na-enyocha ngwaahịa site na ụlọ nyocha nke ndị ọzọ nọọrọ onwe ya iji hụ na ngwaahịa dị mma, na-agbanwe agbanwe, yana ike dị elu nke na-enye ndị ahịa anyị ohere ibi ndụ ahụike ka mma.